नयाँ अर्थव्यवस्था: यसलाई दिनुहोस् | Martech Zone
नयाँ अर्थव्यवस्था: यसलाई दिनुहोस्
शनिबार, अक्टोबर 7, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
गुगल ब्लगोस्कोप मा रिपोर्ट रायटर लेख कि नयाँ गुगल पुस्तक खोजी, जहाँ तिनीहरू प्रतिलिपि अधिकारको बाहिर पुस्तकहरू स्क्यान गर्दै छन् र तिनीहरूलाई अनलाइन राख्दै छन्, वास्तवमै पुस्तक बिक्रीमा मद्दत गर्दैछ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसका लागि अनलाइन बिक्री निर्देशक कोलिन स्कोल्यान्सले गुगल पुस्तक खोजीले हामीलाई अन्वेषकहरूलाई उपभोक्ताहरूमा परिणत गर्न मद्दत गरेको छ।
म पक्का छैन कसरी घटना शब्द गर्ने, तर म यो प्रवृत्ति को बारे मा केहि लेखेको छु। पैसा कमाउनको लागि यसलाई दिँदै ... यो कसरी हुन्छ? खैर, यो बिल्कुल गर्दछ। यो नयाँ मोडेल होइन। जे भए पनि, रेडियोले हामीलाई गीतहरू प्रदान गर्‍यो जुन मानिस गए र पछि खरीद गरियो। संगीत उद्योग डाउनलोडबाट डराउँछ, तर यो व्यर्थताको लडाई हो। पियर टु पिअर प्रोग्रामहरूले विस्तार गर्न जारी राख्नेछ र पत्ता लगाइएको फाइलहरू वितरणको माध्यम प्रदान गर्दछ। त्यो दिन चाँडै आउँछ, कि आरआईएले आफ्नो मुद्दा चलाउन छोड्नुपर्नेछ र राम्रो व्यापार मोडेल निर्माण गर्नुपर्नेछ। सक्कली नेपस्टर / मेटलिका अस्वीकृत भएदेखि मैले अर्को मेटलिका उत्पादन कहिले पनि खरीद गरेको छैन। र यस भन्दा पहिले, म मेटेलिका सबै थोकमा थिए ... म पक्का छुइन कि लार्स र चालक दलले उनीहरूका प्रशंसकहरू मध्ये एकबाट टाढा कति पैसा गुमाए, तर यो धेरै भयो। हो, संगीतमा मेरो स्वाद बर्षौंको क्रममा विकसित भएको छ ... यो अब केहि नरम छ। 🙂
सफ्टवेयर फरक छैन। याहू! भर्खर भर्खर भर्खर तिनीहरूले भर्खर इ-मेल अनुप्रयोग वितरण हुनेछ भनेर ग्राहकले यसका वरिपरिका अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्न सक्ने गरीएको छ। फाइदा? तिनीहरू आफ्नो कम्पनीको पर्खाल बाहिर संसारमा उद्यमशीलता प्रतिभा र चतुरता फैलिरहेका छन्। अधिक र अधिक व्यक्तिहरूले अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्दा, याहूको उपयोग गर्ने इच्छा! को रूपमा ISP को छनौट अपरिहार्य हुनेछ। म एक ग्राहक हुँ जसले छोड्न चाहँदैन ... भाइरस सुरक्षा, स्पाम सुरक्षा, अभिभावकीय पर्यवेक्षण उपकरणहरू, सुरूवात जस्ता उपकरणहरू ... ती सबैले मलाई याहू डीएसएलको साथ रहनको लागि बनाउँदछन्। र प्रो सेवा राम्रो छ, म कहिले पनि एक मिनेट भन्दा बढी आउटेज छैन।
अब पुस्तकहरू! तपाईंहरू जसले मेरो ब्लग हेर्नुभएको र पढ्नुभएको छ भनेर जान्दछु कि म एक किताब बाउन्ड हुँ। मसँग एक धेरै ठूलो पुस्तकालय छैन, तर तपाईं मेरो ठाउँमा जता पनि पुस्तकहरू भेट्टाउनुहुनेछ। म विशेष गरी हार्डकभर पुस्तकहरू मन पराउँछु (त्यसैले म स्वीकार गर्दछु कि म उनीहरूको कभरको लागि पुस्तकहरू खरीद गर्दछु)। मेरो पछिल्लो सौन्दर्य हो
चिसो रगतमा क्यापोटेको। हेरेपछि अविश्वसनीय चलचित्र, म पुस्तक पढ्न प्रेरित भएको थिए।
ब्लगहरू यसलाई पैसाको लागि दिने अर्को प्रकार हो। मैले (धेरै धेरै) ब्लगहरू पढें र सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, सोशल मीडिया, प्रोग्रामिंग, प्रबन्धन, नेतृत्व, इत्यादि को बारे मा ज्ञान को एक विशाल संचय छ धेरै ब्लगहरु मलाई पुस्तकहरु को खरीद गर्न नेतृत्व गरेको छ। विडम्बनाको कुरा, मैले हालसालै सेठको सबैभन्दा नयाँ पुस्तक किनेको थिए ... सामग्री जुन उनीबाट सulated्कित र संगठित गरिएको थियो ब्लग… र मैले यो पुस्तक आफ्नो ब्लगमा विज्ञापन गरेको देखेपछि खरीद गरें। त्यसैले सेतले मलाई यो पहिले नै दिइरहेका थिए ... र मैले यसलाई पनि किनें! उनले यसलाई पैसाको लागि दिए!
मेरो ब्लग सीधा राजस्व को मा अधिक ल्याउन छैन। यद्यपि यो मेरोलागि धेरै सम्भावितहरू र ग्राहकहरूको लागि पुग्नको लागि राम्रो अवसर हो। मलाई केहि सामाजिक मिडिया परामर्श, डाटाबेस मार्केटिंग परामर्श, गुगल नक्शा विकास, WordPress विकास, र नयाँ सामाजिक मिडियामा साझेदारीमा खुशी छु। व्यापार (अझै विकासमा)। यो व्यवसायको अधिकांश मेरो ब्लगको पहुँच बिना प्राप्त गर्न सकिदैन।
केही व्यक्तिहरूले सोच्न सक्छन् कि तपाईको ज्ञान अनलाइन पोष्ट गर्नाले यसलाई नि: शुल्क दिन्छ र तपाईले पैसा खर्च गर्नु हुन्छ। मैले के पत्ता लगाए कि अधिक व्यक्ति 'ज्ञान' चोर्न चाहँदैनन्; बरु, उनीहरू ज्ञानी मानिसहरूलाई खोजिरहेका छन्! तपाइँको भावी ग्राहकलाई जानकारी प्रदान गर्नका लागि ब्लग एक उत्तम माध्यम हो जुन उनीहरूलाई तपाईंलाई भाँडामा लिने वा परामर्श पाउन योग्यको चाहिन्छ।
यो नयाँ अर्थव्यवस्था हो। यदि तपाइँ यसलाई पैसा बनाउन को लागी दिनुहुन्न भने, अरू कोहीले गर्नेछ!
WordPress लेखक: यदि लग ईन भएमा सम्पादन प्रोफाइल लिंक थप्नुहोस्
यस मा एक अनुगमन ... समाचार AllofMP3 जालमा हिट गर्दैछ ... एक अवैध रूसी डाउनलोड साइट जसले एमपी3डाउनलोडहरू प्रदान गर्दछ बिना डिजिटल अधिकार व्यवस्थापन र धेरै सस्तो मूल्य निर्धारणको साथ।
"AllOFMP3.com को प्रशासनले प्रत्येक विशेष देशको कानूनमा जानकारी राख्दैन र विदेशी प्रयोगकर्ताहरूको कार्यका लागि जिम्मेवार छैन।"
मलाई इन्टरनेट मनपर्छ!